Mmekọahụ na-agbanwe ụbụrụ Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Learning Mmekọahụ
Oge ntorobịa bụ oge mmepe anyị mgbe ụbụrụ anyị dị njikere ịkwa iko (ma ọ bụ mmemme) na nkwadebe maka ịbụ okenye. Ọnọdụ ahụ nwere ike ime site na njikọ nke ezigbo di na nwunye na / ma ọ bụ site na mmekọrịta na ịntanetị. Mmụta a ga - ewulite ụzọ dị egwu siri ike. Ọ ga-agbanwe ụbụrụ anyị na omume anyị banyere mmekọahụ na ịhụnanya n'ọdịnihu. Ihe a niile gbadoro ụkwụ n’ihe anyị mụtara n’oge mmepe a dị oke mkpa. Ọ nwere ike isiri ike iwepụ agwa miri emi gbanyere mkpọrọgwụ n'oge a n'oge na-esote.
Ruo mgbe ịntanetị bịara, ndị na-eto eto ga-elepụ anya na porn na magazin ma ọ bụ na DVD, nke ụbụrụ na-akwali na mberede nwere mmasị na mmekọahụ. Ha "ga-ezona" anya n'ihi na ihe dị otú ahụ bụ maka ndị okenye nanị. Ọ bụ ndị nna, ndị okenye ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa. Ha na-eji ngwa ngwa ha eche echiche banyere ndị nwoke ma ọ bụ ụmụ agbọghọ nọ na klas ha ịhapụ esemokwu mmekọahụ. Ka ha na-amalite iso ndị ọzọ na-eto eto na ụmụ nwanyị na-emekọ ihe, ha ga-agbaso ụzọ mgbagwoju anya nke uche na-agagharị na-achọgharị ahụ nke ọzọ na-eduga n'inwe mmekọahụ n'oge ụfọdụ.
Taa ọtụtụ ndị na-eto eto 'na-amalite' ajụjụ gbasara mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ iji mee ka echiche ha bụrụ ihe efu. Ha anaghi eji onyogho di nkpa banyere umu nwanyi ndi nwere uwe mara mma. Ihe karịrị 80% nke ihe eji egwu egwu nwere ihe ike nwoke na nwanyị na ụmụ nwanyị. Ihe na-egbu mgbu, ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ na-akpali agụụ mmekọahụ karịsịa n'ụbụrụ nwata n'ihi na ọ nwere ọnụ ụzọ dị elu maka mkpali dị otú ahụ karịa nwatakịrị ma ọ bụ ụbụrụ tozuru etozu. Ndị mmadụ nwere ike ịhụ ihe kachasị njọ n'otu oge na ekwentị ha karịa ndị nna nna ha nwere ike ịhụ n'oge ndụ ha niile. Mmetụta nke ihe ndị a na-akpali agụụ mmekọahụ na-esi ike na-agbanwe ụbụrụ na ọrụ ya.
A naghị emegharị ọnyá na porn
Anyị echeghị echiche iji merie ọdachi a na-enye hyperstimulating ihe dị na afọ iri gara aga n'ihi ọbịarụ nke ịntanetị netwọk. Mmetụta ahụike ahụ bụ isi nke ndị na-eto eto na ndị ọrụ ahụike na-akọ bụ: ịda mbà n'obi; nchegbu ndị mmadụ; nnwekọrịta nkewa; ụfụ ụbụrụ; ịhụ agụụ mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị n'agbanyeghị nsogbu ndị na-adịghị mma na nsogbu ndị na-erectile.
Kedu ihe ụbụrụ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ nwere ohere na-enweghị njedebe maka ụgwọ ọrụ na-akpali akpali nke ọ na-esiteghị na ya? Ụfọdụ obi na-agbanwe - ọ bụghị n'ụzọ dị mma. Usoro ahụ na-aga nwayọọ nwayọọ. Na mbụ, iji egwu egwu na ịba onwe ya aka na orgasm na-edozi esemokwu mmekọahụ na ndekọ dịka afọ ojuju.
Ma ọ bụrụ na anyị anọgide na-eme onwe anyị ka anyị ghara ịda mbà, obi anyị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ megide anyị. Ọ na-echebe onwe ya megide oke dopamine site na ebelata nzaghachi ya, anyị na-echekwa na ọ dịghị ihe na-erughị ala. Nghọta a na-ebelata na dopamine na-eme ka ụfọdụ ndị ọrụ tinyekwuo aka ịchọpụta mmetụ, nke, n'aka nke ya, na-agbanwe mgbanwe na-adịgide adịgide, ngbanwe dị iche iche nke ụbụrụ. Ha nwere ike ịbụ ihe ịma aka iji gbanwee.
Ntak emi ikpanamde emi? Kedu ihe dị iche na porn nke gara aga?
Icheta & Amuta Mkpakọrịta nwoke na nwanyị na mmekorita nke nwoke na nwanyị >>